किशोरावस्थामा कसरी डिप्रेसनले सकारात्मक सोचलाई असर गर्छ - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जनवरी 27, 2020 | आत्म-सुधार, सकारात्मक सोच |2|
1 किशोरावस्थामा कसरी डिप्रेसनले सकारात्मक सोचाइलाई असर गर्दछ
2 किशोरहरूमा डिप्रेसन
3 किशोर उदासीनता र सकारात्मक सोच
4 किशोर डिप्रेशनका भर्खरका कारणहरू के-के हुन्?
4.2 सामाजिक संजाल
4.3 किशोर डिप्रेशन को संकेत
4.4 तपाईं किशोर डिप्रेसनको बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ?
4.5 व्यावसायिक सहयोग खोज्नुहोस्
4.5.1 गृह सन्देश लिनुहोस्
किशोरावस्थाका वर्षहरू मेरो जीवनका सब भन्दा कठिन क्षणहरू थिए!
फिट गर्ने प्रयासको बीचमा, आत्म-सचेत महसुस गर्दै सधैँ, र हरेक दिन चिढ्ने, यो थियो कुनै न कुनै। त्यसो भए मेरो आमाबुबाको दबाबको साथ 'स्कूलमा राम्रो गर्नुहोस्' भन्ने संयोजन गर्नुहोस्, र तपाईं विपत्तीको लागि एक विधि छ।
तर यसको सामना गरौं - यो कुनै नयाँ कुरा होइन।
वास्तवमा, मेरो उत्तम अनुमान यो छ कि आधा भन्दा बढी जनसंख्यासँग ठीक त्यस्तै जीवनको चरणहरूमा यी भावनाहरू छन्। वास्तवमा, के यो अचम्म छ कि यति धेरै किशोर किशोरीहरू शोकित छन् 'यौवन उदास। '
चाखलाग्दो कुरा, धेरै किशोरकिशोरीहरूमा, यी शोकका भावनाहरू भावनाहरू भन्दा बढी मात्र हो नीलो.
हो, तपाईंले यसको अनुमान गर्नुभयो - किशोर डिप्रेशन।
किशोर उदासीनता एक गम्भीर मानसिक स्वास्थ्य समस्या हो जुन दु: खीको निरन्तर भावनाहरू उत्पन्न गर्दछ। यसका साथ गतिविधिहरुमा उनीहरूको चासोको सामान्य घाटा आउँछ जुन थकान र सुस्तीको संवेदनासँग मिल्दथ्यो।
छोटकरीमा, यसले तपाईंको किशोर किशोरीले सोच्ने, महसुस गर्ने, र कार्य गर्ने बनाउने नकारात्मक असर पार्दछ।
साथीहरूको दबाब, शैक्षिक अपेक्षाहरू, र यौवनको माध्यमबाट जस्ता चीजहरू, सबै किशोर किशोरी बर्षहरूमा नकारात्मक भावनाहरूको एक समूहमा ल्याउँछन्। यद्यपि केही किशोरका लागि यी भावनाहरू केवल अल्पकालीन भावनाहरू मात्र होइनन्।
तिनीहरू डिप्रेसनको लक्षण हुन्।
र के तपाई साँच्चिकै डराउने कुरा जान्न चाहानुहुन्छ? त्यो माथि किशोरहरूको 20% किशोर किशोरीहरूमा अवसादका लक्षणहरू र लक्षणहरू देखाउन सल्लाह दिइन्छ।
केवल स्पष्ट हुन, त्यो छ एक मा पाँच किशोर किशोरीहरु डिप्रेसन बाट ग्रस्त
किशोर उदासीनता र सकारात्मक सोच
दिँदै कि डिप्रेसनले उदासताको पुरानो भावनाहरूतर्फ डो .्याउँछ, यो आश्चर्यजनक कुरा हुनुपर्दैन कि यसले गम्भीर प्रभाव पार्न सक्दछ सकारात्मक सोच.
डिप्रेसन हुन्छ भावशून्यता। सामान्य अर्थ जुन तपाईंले केहि पनि गर्न सक्नुहुन्छ विफल हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ कुनै विन्दु छैन पहिलो स्थानमा पनि कोशिस गर्दै।
यो एक कुटिल चक्र हो - र यसले केहि विनाशकारी प्रभाव पार्दछ।
किशोर डिप्रेसनले स्कूलको प्रदर्शनलाई असर गर्ने, अभिभावक र साथीहरूको सम्बन्ध बिगार्न, र उनीहरूको दैनिक आधारमा कार्य गर्ने क्षमतालाई असर पुर्‍याएको छ। यसका साथ जोखिमपूर्ण व्यवहार र लागूपदार्थ सेवनमा संलग्न हुने सम्भावना बढ्दछ।
ती सबैले मुद्दालाई झन् खराब बनाउन सक्छ।
किशोर डिप्रेशनका भर्खरका कारणहरू के-के हुन्?
आजको समाजमा किशोर डिप्रेसन सामान्य हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरामा कुनै श .्का छैन। र यो संयोग होइन।
वास्तवमा यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ केहि मुख्य कारणहरू छन् किन यो मामला हुन सक्छ।
मलाई थाहा छ तपाईं के सोचिरहनु भएको छ - अलगाव, हास्यास्पद नहुनुहोस्, मेरो किशोरी सधैं उसका साथीहरूलाई सन्देश पठाउँदै छ।
तर यहाँ किकर छ - यो उस्तै चीज होइन बोल्दै.
धेरै जसो किशोर-किशोरीहरू साथीहरूसँग पाठ र सामाजिक मिडिया मार्फत लगातार कुराकानी गर्छन्, तिनीहरू वास्तवमै गर्दैनन् अन्तरक्रिया गर्नुहोस् एक अर्को संग। किशोर अब अधिक समय अनलाइन खर्च गर्नुहोस्, र व्यक्तिमा कम समय, जो पहिले उनीहरूसँग नजिक छ
यो कुरा किन हो?
किनभने वास्तविक व्यक्तिगत कुराकानीहरू अविश्वसनीय हुन्छन् मानसिक स्वास्थ्य को लागी राम्रो छ। तिनीहरू वास्तविक मानव जडानको लागि एक अवसर प्रदान गर्दछ। तिनीहरूले एकताको भावना सिर्जना गर्छन् जुन पर्दा पछाडिबाट प्राप्त गर्न सकिदैन।
र महत्त्वपूर्ण कुरा, यसले डिप्रेसनको जोखिम कम गर्न मद्दत गर्दछ।
अलग हात संग हात मा जान छ सामाजिक संजाल.
सब भन्दा लामो समयको लागि, किशोर किशोरीहरू फिट इनको साथ सled्घर्ष गर्दै आएका छन्। तिनीहरू मनपराउन चाहन्छन्, तिनीहरू एक निश्चित तरिका हेर्न चाहन्छन्, र उनीहरूले उनीहरूले याद गरेको चाहन्छन्।
मलाई यो थाँहा छ, किनकि म उही थिएँ।
र सामाजिक मिडिया यसलाई बनाउँछ खराब। जीवन को मुख्य आकर्षण, सेलिब्रेटी निकाय, र फिटनेस प्रभावकों को एक स्ट्रीम प्रदान गरेर, तिनीहरू निरन्तर आफूलाई अरूसँग तुलना गरिरहेका छन्। यससँग अव्यावहारिक अपेक्षाहरू, र सँधै हराइरहेको महसुस हुन्छ।
यसको कारणले, सोशल मिडिया प्रयोगलाई जोडिएको छ खराब शरीर तस्बिर र खानपान अस्वस्थ - दुबै दुबै डिप्रेशन को लागी परिचित छन्।
किशोर डिप्रेशन को संकेत
यस क्षेत्रको सब भन्दा गाह्रो चीज मध्ये एक सामान्य किशोर एन्जेस्ट र किशोर डिप्रेसन बीचको भिन्नता हाम्रो क्षमतासँग सम्बन्धित छ - र मलाई विश्वास गर्नुहोस् जब म भिन्न छु भनेर भन्छु।
किशोरावस्था एक कठिन समय हो जुन भावनात्मक मुड बदल्नमा परिणाम दिन्छ। यसबाहेक, धेरै किशोर-किशोरीहरूलाई आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्न समस्या हुन्छ, र तिनीहरू पनि सहयोग खोज्ने सम्भावना कम हुन्छ।
किन किशोर किशोरावस्थाका लक्षणहरूका लागि खोजी गर्नु यति महत्त्वपूर्ण छ। केहि अझ स्पष्ट रूपमा समावेश:
छिटो बिग्रँदै शैक्षिक प्रदर्शन
साथीहरूलाई बेवास्ता गर्दै
शौक र गतिविधिहरु बाट फिर्ता
सुत्ने बानीमा परिवर्तन (अनिद्रा एक सामान्य संकेत हो)
अनौठो खाने बानीको विकास
क्रोध, उदासीनता, वा चिडचिडमा बढ्छ
फोकस गर्न असक्षम
थकान र सुस्ती
जोखिम लिने व्यवहारमा भाग लिदै
आत्मघाती विचार वा व्यवहार
जबकि यो निश्चित सूची होईन, यदि तपाईंको किशोर किशोरीले यी लक्षणहरूको संख्या संयोजनमा देखाईरहेको छ भने तपाई केही परिवर्तन गर्न चाहानुहुन्छ।
तपाईं किशोर डिप्रेसनको बारेमा के गर्न सक्नुहुन्छ?
पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, हामी अलगाव र सामाजिक मिडियाको सकेसम्म मानवीय सम्भवको विरूद्ध लड्न चाहन्छौं।
यसको अर्थ तपाइँको किशोर किशोरीहरुलाई प्रोत्साहन दिदै मित्रहरूलाई आमन्त्रित गर्न, सँगै खाना खाँदा नियमित रूपमा खान, र सक्रिय रूपमा तपाइँको बच्चाहरू संग गतिविधिहरूमा भाग लिन कोशिस गर्दै। यससँग, एक उत्कृष्ट चरण भनेको आफ्ना बच्चाहरूलाई खेल खेल्न वा क्लबहरूमा सामेल हुन प्रोत्साहित गर्नु हो।
त्यसोभए सोशल मिडियाको क्षेत्रमा, तपाईंको बच्चालाई याद दिलाउन सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सेलिब्रेटीहरूको फोटोशप्ड चित्रहरूले उनीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन। वास्तवमा जस्तो देखिन्छ.
थप रूपमा, तपाइँको बच्चाहरूसँग सोशल मिडियाको सम्भावित नकारात्मक बारेमा छलफल गर्न निश्चित गर्नुहोस्, जबकि सामाजिक मिडियासँग तपाइँको आफ्नै कुराकानीलाई सीमित गर्दै। याद गर्नुहोस्, 'मैले गरेजस्तै गर्नुहोस्' मात्र 'मैले भनेजस्तो गर्नुहोस्' भन्दा बढी शक्तिशाली छ।
व्यावसायिक सहयोग खोज्नुहोस्
र यदि सबै विफल हुन्छन्, याद गर्नुहोस् कि यो सबै डूम र उदास छैन।
डिप्रेसन मृत्युदण्डको सजाय होईन, र त्यहाँ उपचारहरू उपलब्ध छन् - र यो सबै पेशेवर मद्दत खोजेर सुरु हुन्छ।
डिप्रेसनको प्रारम्भिक निदान स्पष्ट रूपमा उपचार को परिणाम सुधार गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए यदि तपाईं साच्चै नै तपाईंको बच्चा डिप्रेसनको सिकार भएको डर छ भने, प्रयास गर्नुहोस् र उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो एउटा चिकित्सक वा मनोचिकित्सकलाई भेट्न लैजानुहोस्।
यी व्यक्तिहरूले दैनिक रूपमा यस प्रकारको सामानहरू देख्दछन्, र उनीहरूले जान्दछन् के काम गर्छ र के गर्दैन।
केवल उनीहरूले तपाइँको किशोर भावनालाई व्यवहार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्, तर उनीहरूले केही सम्भावित उपचार विकल्पहरू पनि सिफारिस गर्न सक्षम हुनेछन् (जस्तै चीजहरू TMS उपचार र प्रकाश उपचार दिमागमा आउनुहोस्)।
त्यसैले छोटकरीमा जब किशोरहरूमा डिप्रेसनको लक्षणहरू छन्, सहायता खोज्न नडराउनुहोस्!
गृह सन्देश लिनुहोस्
आधुनिक टेक्नोलोजीको उदय र सामाजिक अलगावमा वृद्धिको साथ, किशोर उदासीनता सामान्य हुँदै गइरहेको छ। यससँग दुख र सुस्ती, कम शैक्षिक प्रदर्शन, र जीवन गुणवत्ता गुमाउने भावना आउँछ।
छोटकरीमा, यो एक डरलाग्दो मुद्दा हो।
तर किशोर डिप्रेसनको लक्षण र लक्षणहरूको नजिकबाट हेर्दा, तपाईले केही परिवर्तनहरू प्रारम्भमा गर्न सक्नुहुनेछ र राम्रोको लागि यसको ट्र्याकहरूमा रोक्न सक्नुहुन्छ।
२ तरिकाहरू जुन किशोर किशोरीहरूमा निराशाको साथ मद्दत गर्न सक्छ journaling र पढ्दै प्रेरणादायक उद्धरण.
डा। लिन्डसे इजरायल एक बोर्ड-प्रमाणित मनोचिकित्सक हो। उनको लक्ष्य बिरामीहरुलाई सशक्त महसुस गर्न मद्दत गर्नु हो किनकि तिनीहरूको लक्षणले उनलाई शक्तिहीन महसुस गर्न सक्छ।
उनी ट्रान्सक्रानियल म्याग्नेटिक स्टीमुलेशन (टीएमएस) थेरापीमा बिभिन्न साइकियट्रिक डिसआर्डरको उपचारको लागि विशेषज्ञ छिन्। TMS डिप्रेसनको लागि एफडीए-अनुमोदित हो र परम्परागत उपचारको लागि गैर-आक्रमणकारी, गैर-औषधी वैकल्पिक हो।
डा। इजरायलको डिप्रेसन उपचार केन्द्र, सफलता टीएमएस, यस उन्नत थेरापीमा केन्द्रित छ जसले बिरामीहरूलाई डिप्रेसनबाट छुटकारा पाउन र उनीहरूको उत्तम जीवनमा फर्कन अनुमति दिन्छ।
लयड फरवरी मा 9, 2020 मा 11: 07 एम
नमस्ते! किशोर डिप्रेशनमा तपाईंको पोष्ट आँखा खोलि रहेको थियो तर तपाईं कसरी चिन्नुहुन्छ जब एक किशोर उदास छ र सामान्य किशोर नहुँदा? मूडी र फिर्ता गरियो।
व्यवस्थापक फरवरी मा 10, 2020 मा 6: 47 बजे
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद। लेखमा भनेझैं "किशोर किशोरावस्था र किशोरावस्थाको उदासीनताको बीचमा छुट्याउन" गाह्रो हुन सक्छ।
त्यसोभए यदि तपाईं साच्चै नै तपाईंको बच्चा डिप्रेसनको सिकार भएको डर छ भने, प्रयास गर्नुहोस् र उनीहरूलाई जतिसक्दो चाँडो एउटा चिकित्सक वा मनोचिकित्सकलाई भेट्न लैजानुहोस्। सफलता टीएमएस एक निःशुल्क परामर्श सेवा प्रस्ताव।
पछिल्लो5 सुझावहरू तपाईंको इच्छाशक्ति बढावा दिन
अर्कोPower० शक्तिशाली मानसिक स्वास्थ्य प्रेरणादायक उद्धरण